သူမပင်ပင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ဈေးသက်သာစွာနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် - Voice Of Burma
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်ကတော့ ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံပြီး ရှာထားတဲ့ ငွေဖြင့် ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးကို ရောင်းချဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်နော်။ အိမ်ကို ငွေသားဖြင့် ပေးချေစရာမလိုဘဲ banking ဖြင့်သာ ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ အိုင်းရင်းက ဆိုလာပါတယ်နော်။ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ပြင်ထားတဲ့ အိမ်လေးဖြစ်တာကြောင့် ဝယ်ယူသူများအနေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝရစေမှာ အသေချာပါပဲနော်။
အိုင်းရင်းကလည်း ” Pageမှာတင်ဖို့အားနာနာနဲ့ပဲ ❤️စိတ်ဝင်စားသူများဆက်သွယ်ပေးပါနော်Ireneရဲ့ချွေးနဲစာထဲကအိမ်လေးပါ ပြင်ထားတာလဲနေချင်စဖွယ်လေးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ငမိုးရိပ်(စံပြဈေး)နားက လမ်းမနဲ့လဲနီးပါတယ်(တန်ဖိုးဝန်နည်းတဲ့အခန်းလေးပါ)ပေအကျယ်၁၂ခွဲ၅၂ပေ(၆လွှာ)အိပ်ခန်း၂ခန်းပုံကအရောင်ရော Editရောမလုပ်ထားပါဘူးရှင်တချို့ပုံကနေဝင်ခါနီးရိုက်တာပါစိတ်ဝင်စားရင်တော့ကြွခဲ့ပါရှင်။
ဈေးကတော့cbမှာမေးပေးနော်?အော်မေ့လို့ ငွေသားလုံးဝမယူပါ Bankထဲကိုလွှဲပေးရုံပဲ??❤️ ဆက်သွယ်ရန် 0943162279ပါညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်❤️​မျက်စိရှူပ်သွားရင်Sorry ပါနော်” လို့ ရေးထားပါတယ်နော်။ ကဲ တိုက်ခန်းဝယ်ပြီး စုဆောင်းနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲနော်။
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော အိုငျးရငျးဇငျမာမွငျ့ကတော့ ကိုယျတိုငျ အပငျပနျးခံပွီး ရှာထားတဲ့ ငှဖွေငျ့ ဆောကျထားတဲ့အိမျလေးကို ရောငျးခဖြို့ ပွငျဆငျနပေါတယျနျော။ အိမျကို ငှသေားဖွငျ့ ပေးခစြေရာမလိုဘဲ banking ဖွငျ့သာ ပေးရမှာဖွဈတယျလို့ အိုငျးရငျးက ဆိုလာပါတယျနျော။ကိုယျတိုငျ စိတျကွိုကျပွငျထားတဲ့ အိမျလေးဖွဈတာကွောငျ့ ဝယျယူသူမြားအနနေဲ့ စိတျကနြေပျမှုအပွညျ့အဝရစမှော အသခြောပါပဲနျော။
အိုငျးရငျးကလညျး ” Pageမှာတငျဖို့အားနာနာနဲ့ပဲ ❤️စိတျဝငျစားသူမြားဆကျသှယျပေးပါနျောIreneရဲ့ခြှေးနဲစာထဲကအိမျလေးပါ ပွငျထားတာလဲနခေငျြစဖှယျလေးဖွဈမယျထငျပါတယျနျောငမိုးရိပျ(စံပွဈေး)နားက လမျးမနဲ့လဲနီးပါတယျ(တနျဖိုးဝနျနညျးတဲ့အခနျးလေးပါ)ပအေကယျြ၁၂ခှဲ၅၂ပေ(၆လှာ)အိပျခနျး၂ခနျးပုံကအရောငျရော Editရောမလုပျထားပါဘူးရှငျတခြို့ပုံကနဝေငျခါနီးရိုကျတာပါစိတျဝငျစားရငျတော့ကွှခဲ့ပါရှငျ။
ဈေးကတော့cbမှာမေးပေးနျော?အျောမလေို့ ငှသေားလုံးဝမယူပါ Bankထဲကိုလှဲပေးရုံပဲ??❤️ ဆကျသှယျရနျ 0943162279ပါညှိနှိုငျးလို့ရပါတယျ❤️​မကျြစိရှူပျသှားရငျSorry ပါနျော” လို့ ရေးထားပါတယျနျော။ ကဲ တိုကျခနျးဝယျပွီး စုဆောငျးနကွေတဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ လကျမလှတျသငျ့တဲ့ အခှငျ့အရေးပါပဲနျော။
အနန္တဂိုဏ်းဝင် ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးရဲ့မွေးနေ့မှာ ရဟန်းဝတ်ပြီး မိဘကျေးဇူးဆပ်လိုက်တဲ့ အဆိုတော် G Fatt